Ny Dimensity 800U no processeur Mediatek vaovao misy 5G | Androidsis
Mediatek dia nanao zavatra tsara nandritra ny fotoana kelikely mba hanandramana ho fifaninanana matanjaka kokoa ho an'ny Qualcomm, mpifaninana lehibe indrindra aminy eo amin'ny sehatry ny semiconductor ho an'ny finday avo lenta, ary inona no fomba tsara kokoa hanatratrarana an'io noho ny manolotra chipsets mpanodina matanjaka noho ireo andiany taloha?
El Dimensity 800U Io no filanao vaovao mafana miaraka amin'ny fampisehoana tena tsara, izay vao nambara ho an'ny elanelany. Izany dia mifanaraka amin'ny fironana mifandraika farany, izay, tsy misy tsy inona ary tsy inona, ny 5G fanta-daza izay, na dia mbola tsy nitatra be erak'izao tontolo izao aza izy io ary tsy hita any amin'ireo tanàna sy firenena sasany fotsiny, dia mihabe hatrany tany ary vinavinaina ho an'ny 2021 sy ny taona ho avy izay hanolo ny 4G LTE amin'ny ankamaroan'izao tontolo izao.
1 Ny rehetra momba ilay chipset Mediatek Dimensity 800U vaovao
2 Rahoviana no hiakatra eo amin'ny tsena ity mpikirakira vaovao ity ary iza amin'ny telefaona iza no hisaoranan'ity processeur vaovao ity?
Ny rehetra momba ilay chipset Mediatek Dimensity 800U vaovao
Ny chipset processeur Dimensity 800U vaovao dia System-on-Chip valo fototra izay misy coro ARM Cortex-A76 roa miasa amin'ny faharetan'ny famantaranandro avo indrindra 2.4 GHz ary enina Cortex-A55 enina miasa amin'ny taha hatramin'ny 2.0 GHz, izay samy mifantoka amin'ny fanomezana fahombiazan'ny angovo tsara kokoa, tsy toy ilay voalaza teo aloha, izay dia ny manome ny fahombiazana farany azo atao raha ilaina izany.
Ho an'ny sary sy fampisehoana tsaratsara kokoa ny lalao sy ny atiny multimedia, miaraka amin'ny ARM's Mali-G57 GPU ary manana fantsom-panafody artificience intelligence (APU) mitokana., izay manatsara ny fikirakirana ny lahasa ary miasa amin'ny maha-processeur anao.
Ny modem an'ny Dimensity 5U's 800G dia manohana ny dual SIM 5G + 5G, ny dual VoNR (Voice over New Radio), ny tambajotra sub-6 GHz NSA / SA, izay ny fenitra sy ny fanangonana ny mpitatitra 5G roa (2CC 5G-CA). Izy io koa dia manohana ny haitao MediaTek 5G UltraSave an-tsambo, izay ny andraikiny dia ny fitantanana ny asa maodely mifototra amin'ny tontolon'ny tamba-jotra sy ny kalitaon'ny fandefasana data hanatsarana ny androm-piainan'ny fitaovana finday, ka ny fanjifana ao amin'ity chipset ity, raha ny fifandraisana dia ambany noho ny an'ny hafa miaraka amin'ny fanohanana. ho an'ny tamba-jotra 5G, zavatra tsara ankasitrahana, satria ity tambajotra ity dia mandany betsaka mihoatra ny teo alohany.
Fitaovana misy habe 800U mety tafiditra ao RAM LPDDR4x (hatramin'ny 2.133 MHz) ary fitehirizana UFS 2.2. Ny SoC dia manohana ny fampisehoana Full HD + miaraka amin'ny taha 120Hz. Ho fanandramana fanatsarana mivoatra, manohana ny motera HDR10 + sy MediaTek MiraVision PQ miaraka amin'ny fanatsarana HDR ho an'ny karazan-tsarimihetsika samihafa.
Ny IPS an'ny Mediatek Dimensity 800U dia manohana ireo sensor misy sary hatramin'ny 64 MP ary hatramin'ny fakan-tsary efatra aoriana. Ny fampiasa amin'ny processeur hafa dia misy ny fanohanana ireo teny mitarika maro ho an'ny mpanam-peo isan-karazany, ny fihenan'ny tabataban'ny mikraoba, Wi-Fi 802.11ac, ary ny fanohanana ny Bluetooth 5.1.
MediaTek dia nanambara fa ny Dimensity 800U dia natao hamoahana 11% sy 28% haingana kokoa amin'ny CPU sy GPU, raha ampitahaina amin'ny chipset Dimensity 720, izay nampiditra ny volana lasa ho iray amin'ireo vahaolana mahomby indrindra ho an'ny finday avo lenta.
Raha hametraka bebe kokoa amin'ny sahan-kevitra momba an'io fampitahana io, ny Dimensity 720 efa voalaza dia chipset valo-core izay manana configur izay tarihin'ny core Cortex-A76 efatra amin'ny 2.0 GHz ary Cortex-A55 efatra hafa amin'ny 2.0 GHz. Io dia mitovy amin'ny 4 MHz Fahatsiarovana LPDDR2.133X RAm ary ny GPU izay ireharehany dia ny Mali-G75.
Rahoviana no hiakatra eo amin'ny tsena ity mpikirakira vaovao ity ary iza amin'ny telefaona iza no hisaoranan'ity processeur vaovao ity?
Tokony hanomboka amin'ny filazana isika fa ny telefaona misy chipset Dimensity dia mbola tsy natomboka tany amin'ny tsena ivelan'i Shina, farafaharatsiny tsy ofisialy.
Vao haingana ny orinasa no nanamafy izany Ny fitaovana mandeha amin'ny refy Dimensity voalohany dia hanomboka amin'ny tsena ivelan'i Sina amin'ny telovolana fahatelo amin'ity taona ity. Amin'izao fotoana izao, tsy misy vaovao momba ny telefaona voalohany izay ho tonga miaraka amin'ny Dimensity 800U vaovao, izany no antony tsy maintsy hiandrasantsika fanambarana ofisialy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Dimensity 800U no chipset vaovao 5G an'ny Mediatek ho an'ny finday antonony